Sidee Ayay Kooxaha U Kala Sarreeyaan Kaddib Kulamadii Koowaad Ee Horyaalka Premier League? – Laacibnet.net
Sidee Ayay Kooxaha U Kala Sarreeyaan Kaddib Kulamadii Koowaad Ee Horyaalka Premier League?
Horyaalka Premier League ayaa toddobaadkiisii koowaad uu soo dhamaaday, waxaana hoggaanka ku naaloonaysa Arsenal oo guul weyn ku furatay xili ciyaareedka.
Siddeed ciyaarood ayaa dhacay toddobaadkan, waxaana baaqday laba kulan oo ay labada kooxood ee reer Manchester ee United iyo City qayb ka ahaayeen, kuwaas oo iyaga dartood dib loogu dhigay maadaama ay ku raageen tartamada Europa League iyo Champions League oo ay waqti dambe ka baxeen.
Ciyaartii ugu horreysay ee horyaalka Premier League lagu furay, waxay u dhaxaysay Arsenal iyo Fulham, waxaana 3-0 ay guushu ku raacday Gunners oo tababare Mikel Arteta uu qaab cajiib ahaa kulankaas ugu sii diyaariyey, isla markaana ay isku muujiyeen saxeexyada cusub ee Willian iyo Gabriel Magalhaes.
Kulankii ugu dambeeyey ee usbuuca lagu soo xidhayna waxa uu ahaa midkii ay xalay Chelsea 3-1 ku karbaashtay Brighton oo ay marti u ahayd, waxaana uu Lampard ciyaartan kusoo bilaabay labada saxeex ee cusub ee reer Germany ee Kai Havertz iyo Timo Werner oo bandhig wanaagsan muujiyey.
Kooxda horyaalka Premier League difaacanaysa ee Liverpool ayaa dirqi kaga baxsatay Leeds United oo ay Anfield ku qaabishay, waxaanay ciyaartoodu noqotay mid taariikhda ku gasha in goolashii ugu badnaa la iska dhaliyey iyadoo ciyaartii ugu horreysay xili ciyaareedka ah.
Liverpool waxa xilli dambe saddexda dhibcood gacanta ka saaray Mohamed Salah oo daqiiqaddii 88aad rikoodhe u dhaliyey, isaguna isku qoray taariikhda oo saddexlay la yimid kulankii furitaanka, sidoo kalena afar sannadood oo isku xiga ciyaarihii koowaad goolal ka dhaliyay. Ciyaartan ayay Liverpool ku badisay 4-3.
Kulamada koowaad ee horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan, dhamaantood waxaa la iska dhaliyey goolal, waxaana lix kulan ka dhashay laba gool iyo ka badan, balse labada ciyaarood ayaa iyaguna ku dhamaaday min 1-0.
Crystal Palace oo 1-0 ku garaacday Southampton maalintii Sabtida iyo Everton oo 1-0 ku dhiibtay Tottenham ayaa ah labada ciyaarood ee kaliya ee min hal gool la iska dhaliyey.
Sidee loo kala horreeyaa?
Arsenal ayaa hoggaanka haysa, waxaanay leedahay saddex dhibcood iyo saddex gool, waxaanay isku mid yihiin Leicester City oo iyaduna saddex gool iyo saddex dhibcood haysata.
Chelsea ayaa saddexaad ku fadhida saddex dhibcood iyo laba gool. Sidaas oo kale, Newcastle ayaa haysata laba gool iyo saddex dhibcood laakiin barbilowga magacooda ayaa ay ku kala sarreeyaan.
Wolves oo 2-0 ku karbaashtay Sheffield United ayaa shanaad fadhiya.
Halkan kaga bogo sida kooxuhu u kala sarreeyaan:
SADAM TIMIRO says:
waaa laysu dambeeyaaa